Akwụ ụgwọ Android ga-adị na Spain afọ a | Akụkọ akụrụngwa
Akwụ ụgwọ gam akporo ga - adị na Spain n’afọ a
Usoro ugwo ugwo gam akporo ga abia maka ndi oru na Spain n’oge otu afo dika akuko nke umuaka umuaka Mountain View na Google I / O 2017 ya nwere ike ibu uzo ugwo nke ato site na ngwa ekwenti anyi nwere na obodo anyi. Na mgbakwunye na Android Pay na Spain anyị enweela Samsung Pay na Apple Pay ruo oge ụfọdụ, ya mere na nke a ọ ga - abụ nke atọ ịbata mba anyị n'otu oge ahụ a ga - ebido ya na Canada, Russia, Brazil na Taiwan.
O yiri ka usoro ịkwụ ụgwọ site na NFC na-agba ọsọ Inwe teknụzụ a na ngwaọrụ dịwanye mkpa. Maka ugbu a, ihe dị mkpa bụ ikwu okwu na ụlọ ọrụ ụlọ akụ iji kee nkwekọrịta ndị dị mkpa ka ndị ọrụ ha wee nwee ike iji ọrụ ịkwụ ụgwọ na ekwentị na-akpakọrịta kaadị ha ma ndị ọzọ bụ ịnweta akaụntụ na PayPal na nso nso a na ịkwụ ụgwọ ahụ. usoro na data data kwekọrọ na sistemụ a, ihe anyị meberela na mba anyị.
Nkọwa ọzọ ha kwụsịrị na Google I / O bụ ndị ọrụ na-eji Gam akporo Wear ngwaọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ a na-akwụ ụgwọ. Obi abụọ ndị na-awakpo anyị ugbu a bụ oge ọ ga-ewe iji nweta nnabata na nnabata nke ụlọ ọrụ akụ na sistemụ. Ka anyị hụ ma ọ bụrụ nke nta nke nta anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ndị ọzọ mpi maka Apple Lezienụ na nke nta nke nta na-na-ọtụtụ ndị ọrụ na ụzọ nke Samsung na Google na-lagging a bit n'azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Akwụ ụgwọ gam akporo ga - adị na Spain n’afọ a
Telegram emelitere na ozi dị mkpa: ozi vidio, ịkwụ ụgwọ na ụgwọ ọrụ
Onyonyo nke OnePlus 5 na-ehipu ma o nweghi nkpu okwu nko nke 3,5mm